Inona no atao hoe RFM? | Martech Zone fanafohezan-teny
Martech Zone » fanafohezan-teny » Fanafohezana manomboka amin'ny R	» peon'ny RFM
RFM no fanafohezana ny Recency, Frequency, Vola.
Ny fanavaozana, ny matetika ary ny sandan'ny vola dia metrika ara-barotra ampiasaina handinihana sy hamantarana ireo mpanjifa sarobidy indrindra mifototra amin'ny fitondran-tenany. Ny RFM dia azo ampiasaina haminavina, hanao laharam-pahamehana, ary hitarika ny fandraisana anjara amin'ny ho avy mba hampitombo ny lanjan'ny mpanjifa (CLV) amin'ny fanafainganana sy fampitomboana ny fividianana. Azo ampiasaina ihany koa izy io mba hamaritana tsara kokoa ny mpanjifanao na kendrena mpanjifa manana toetra demografika na firmagraphic mitovy.